ကြက်သွန်နီစားသုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ | MyFood Myanmar
ကွကျသှနျနီဟာ အိမျတိုငျးမှာ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ အသီးအနှံဆိုရငျ မမှားပါဘူး။ ဟိုတလောက ကွကျသှနျနီတှေ ဈေးတှတေကျကုနျတော့ အိမျရှငျမတှေ
ရငျတမမနဲ့ ဈေးဝယျခဲ့ရတာကို မှတျမိကွဦးမှာပါ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကွကျသှနျနီဟာ မွနျမာမိသားစုတိုငျး အတှကျ မပါမဖွဈတဲ့ အရာ ဖွဈနလေို့ပါပဲ။ ကွကျသှနျနီက မကျြရညျကစြပေမေယျ့အရသာကတော့ အတျောကောငျးလို့ ဆိုရပါမယျ။ ကွကျသှနျနီကို အားလုံး သိတဲ့အတိုငျး အစိမျးစားလို့ ရသလို ဟငျးလြာတှထေဲကိုလညျး ထညျ့ခကျြစားလို့ ရပါတယျ။ သူပါရငျ ဟငျးလြာတှရေဲ့ အနံ့ဟာ မှေးပွီး စားခငျြစဖှယျ ဖွဈနတေော့တာပါပဲ။
ကွကျသှနျနီဟာ နလေောငျမှုကို ကာကှယျပေးတယျဆိုတာ သငျ သိပါသလား? ဒီအကွောငျးပွခကျြကွောငျ့ပဲ ကွကျသှနျနီကို နှရောသီမှာ စားသုံးဖို့ အကွံပွုပါရစေ။ ကွကျသှနျနီမှာAntibiotic, Antimicrobial နဲ့ Antiseptic ဂုဏျသတ်တိတှေ ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ ရောဂါပိုးမှားတှကေို ကာကှယျပေးတဲ့ အပွငျ ဆံပငျ၊ ဦးရပွေားနဲ့ အသားအရညျအတှကျလညျး ကောငျးကောငျး အလုပျ လုပျပေးပါတယျ။ ကွကျသှနျနီ သတ်တုရညျဟာ ဗောကျနဲ့ ဆံပငျကြှတျခွငျးကို ကာကှယျပေးတဲ့ အပွငျ ပြားတုပျ ခံရတာနဲ့ အငျးဆကျပိုးမှား အကိုကျခံရတဲ့ အခါ လိမျးပေးလို့လညျး ရပါတယျ။
ကွကျသှနျနီဟာ ဖြားနာတဲ့ အခါ အပူကို လြော့ခပြေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ တခြို့ဆို မကျြစိအမွငျ ကွညျလငျဖို့ ကွကျသှနျနီ သတ်တုရညျကို မကျြစဉျးအဖွဈ ခတျပေးကွပါတယျ။ ကွကျသှနျနီကို နတေို့ငျး စားသုံးခွငျးဟာ ညဘကျ စိတျကစဉျ့ကလြား ဖွဈခွငျးကို လြော့ခပြေးပါတယျ။ ကွကျသှနျနီမှာ Vitamins B အပွညျ့အ၀ ပါဝငျပွီး Vitamin B နဲ့ C ၊ ပိုတကျဆီယမျ၊ ဆာလဖာ၊ သံဓာတျနဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ကောငျးမှနျစှာ ပါဝငျပါတယျ။ အဝလှနျတာကို လြော့ခပြေးဖို့ ဆိုဒီယမျဓာတျတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
ကွကျသှနျနီ စားသုံးခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲက Vitamin C ဓာတျကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျတဲ့ အတှကျ ဖြားနာခွငျး၊ ခြောငျးဆိုး၊ အအေးမိနဲ့ အလကျဂဈြဖွဈတာတှကေို ခုခံပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ ဦးနှောကျရဲ့ အကွောတှကေို ကောငျးကောငျး အလုပျပေးတဲ့ အတှကျ မှတျဉာဏျတှကေို ကောငျးကောငျး ထိနျးပေးထားနိုငျပါတယျ။ ရငျကွပျရောဂါ ကုသရာမှာလညျး အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ ကွကျသှနျနီဟာ ကငျဆာ ရောဂါကို ကာကှယျပေးတယျဆိုတာတော့ အားလုံး သိပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အူမကွီးကငျဆာ၊ လညျခြောငျးကငျဆာနဲ့ ဦးနှောကျကငျဆာတို့ အတှကျ အရေးပါတဲ့ ကောငျးကြိုးတှေ ပေးပါတယျ။
ကွကျသှနျကို အစိမျးစားခွငျးဟာ ကွှကျတကျခွငျးနဲ့ ကွှကျသားတှေ ရောငျရမျးနာကဉျြတာကို သကျသာစပေါတယျ။ မွနျမာလူမြိး အမြားစုကတော့ အသုပျ သုပျစားတဲ့ အခါ ကွကျသှနျစိမျးကို ထညျ့စားတတျပါတယျ။ မွနျမာတို့ နတေို့ငျး စားသုံးနတေဲ့ ကွကျသှနျနီမှာ ကောငျးကြိုးတှေ အမြားကွီး ရှိတယျဆိုတာ တှရေ့ပါပွီ။ တဈခု သတိထားရမှာက ကွကျသှနျနီကို ဟငျးခကျြရာမှာ ထညျ့ရငျဖွဈဖွဈ အစိမျးစားရငျဖွဈဖွဈ အခှံနှာပွီးတဲ့ အခါ ရဆေေးပွီးမှ စားသုံးပါလို့ အကွံပွုပါရစေ။
Photo Credit: Adventuresinlocalfood
ကြက်သွန်နီဟာ အိမ်တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အသီးအနှံဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဟိုတလောက ကြက်သွန်နီတွေ ဈေးတွေတက်ကုန်တော့ အိမ်ရှင်မတွေ
ရင်တမမနဲ့ ဈေးဝယ်ခဲ့ရတာကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြက်သွန်နီဟာ မြန်မာမိသားစုတိုင်း အတွက် မပါမဖြစ်တဲ့ အရာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကြက်သွန်နီက မျက်ရည်ကျစေပေမယ့်အရသာကတော့ အတော်ကောင်းလို့ ဆိုရပါမယ်။ ကြက်သွန်နီကို အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း အစိမ်းစားလို့ ရသလို ဟင်းလျာတွေထဲကိုလည်း ထည့်ချက်စားလို့ ရပါတယ်။ သူပါရင် ဟင်းလျာတွေရဲ့ အနံ့ဟာ မွှေးပြီး စားချင်စဖွယ် ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
ကြက်သွန်နီဟာ နေလောင်မှုကို ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာ သင် သိပါသလား? ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပဲ ကြက်သွန်နီကို နွေရာသီမှာ စားသုံးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ကြက်သွန်နီမှာAntibiotic, Antimicrobial နဲ့ Antiseptic ဂုဏ်သတ္တိတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင် ဆံပင်၊ ဦးရေပြားနဲ့ အသားအရည်အတွက်လည်း ကောင်းကောင်း အလုပ် လုပ်ပေးပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ သတ္တုရည်ဟာ ဗောက်နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင် ပျားတုပ် ခံရတာနဲ့ အင်းဆက်ပိုးမွှား အကိုက်ခံရတဲ့ အခါ လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ကြက်သွန်နီဟာ ဖျားနာတဲ့ အခါ အပူကို လျော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တချို့ဆို မျက်စိအမြင် ကြည်လင်ဖို့ ကြက်သွန်နီ သတ္တုရည်ကို မျက်စဉ်းအဖြစ် ခတ်ပေးကြပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကို နေ့တိုင်း စားသုံးခြင်းဟာ ညဘက် စိတ်ကစဥ့်ကလျား ဖြစ်ခြင်းကို လျော့ချပေးပါတယ်။ ကြက်သွန်နီမှာ Vitamins B အပြည့်အ၀ ပါဝင်ပြီး Vitamin B နဲ့ C ၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဆာလဖာ၊ သံဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ကောင်းမွန်စွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အ၀လွန်တာကို လျော့ချပေးဖို့ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ စားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Vitamin C ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုး၊ အအေးမိနဲ့ အလက်ဂျစ်ဖြစ်တာတွေကို ခုခံပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ အကြောတွေကို ကောင်းကောင်း အလုပ်ပေးတဲ့ အတွက် မှတ်ဥာဏ်တွေကို ကောင်းကောင်း ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ရင်ကြပ်ရောဂါ ကုသရာမှာလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကြက်သွန်နီဟာ ကင်ဆာ ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာတော့ အားလုံး သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အူမကြီးကင်ဆာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာနဲ့ ဦးနှောက်ကင်ဆာတို့ အတွက် အရေးပါတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ပေးပါတယ်။
ကြက်သွန်ကို အစိမ်းစားခြင်းဟာ ကြွက်တက်ခြင်းနဲ့ ကြွက်သားတွေ ရောင်ရမ်းနာကျဉ်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ မြန်မာလူမျိး အများစုကတော့ အသုပ် သုပ်စားတဲ့ အခါ ကြက်သွန်စိမ်းကို ထည့်စားတတ်ပါတယ်။ မြန်မာတို့ နေ့တိုင်း စားသုံးနေတဲ့ ကြက်သွန်နီမှာ ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါပြီ။ တစ်ခု သတိထားရမှာက ကြက်သွန်နီကို ဟင်းချက်ရာမှာ ထည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အစိမ်းစားရင်ဖြစ်ဖြစ် အခွံနွှာပြီးတဲ့ အခါ ရေဆေးပြီးမှ စားသုံးပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
MyFood Myanmar2019-11-17T14:03:45+06:30March 3rd, 2016|Health, Knowledge|